Ndị ntụgharị okwu San Jose na Ọrụ Ntụgharị Asụsụ - Peeji nke Mbụ
Ndị ntụgharị asụsụ San Jose na ọrụ ntụgharị asụsụ
Ọrụ Ntụgharị Asụsụ San Jose
Asambodo & nzere maka San Jose
Kemgbe 1985, Ọrụ Asụsụ Amerịka (AML-Global) abụrụla onye na-eweta ọrụ ntụgharị asụsụ dị na San Jose, CA. N'ime ọtụtụ afọ anyị azụlitela aha mara mma maka ịdị mma nke ndị ntụgharị anyị yana yana ọrụ ndị ahịa anyị na-enweghị atụ.
Ọrụ ntụgharị asụsụ San Jose maka Ọnọdụ ọ bụla
Dị ka onye na-eweta ọrụ asụsụ guzosie ike ogologo oge, anyị na-enye ndị ọkachamara pụrụiche na-atụgharị uche n'ime mmadụ, ntụgharị vidiyo Remote (VRI) na Ntụgharị n'elu ekwentị (OPI). Ọrụ anyị dị ọnụ ahịa, dịkwa mfe ịtọlite ​​ma dị awa 24, ụbọchị asaa n'izu. Anyị na -arụ ọrụ n'ihe karịrị asụsụ 7 n'ozuzu, nke gụnyekwara Asụsụ Ogbi America (ASL).
Biko kpọtụrụ anyị maka a free online see okwu ma ọ bụ n'okpuru na ịtụ:
Ndị ntụgharị asụsụ mpaghara na -enyere aka ibelata ọnụ ahịa
Kemgbe 1985, Ọrụ Asụsụ America enyela ọrụ ntụgharị okwu na New York na n'ahịa ọ bụla dị na United States, yana gburugburu ụwa. Ndị ntụgharị AML-Global enwetara nzere & nzere na ahụmịhe, mara ihe, yana dị oke arụ ọrụ na mpaghara iwu. Ndị ntụgharị asụsụ anyị na-asụ asụsụ 200+ ma na-arụzu nke ọma n'otu oge na ntụgharị okwu n'usoro. Omimi anyị nke ndị ntụgharị asụsụ nwere asambodo, ndị tozuru oke na ndị nwere ahụmahụ dị oke mkpa n'ibelata ọnụ ahịa anyị site n'iwepụ njem dị oke ọnụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na nhazi ngwa ngwa ndị ọzọ. Ndị ntụgharị AML-Global bụ otu nwere nkà, nke nwere ndị ọkachamara nwere asambodo bụ ndị nwere ahụmahụ na ụdị ntọala niile.
Asambodo na ntozu maka ọrụ ntụgharị asụsụ na San Jose
Ndị ahịa anyị nwere ahụmịhe, ndị maara ihe nke ọma na ndị otu njikwa ọrụ ga -enyere gị aka na nhazi gị, nke gụnyere akụrụngwa ọdịyo, mkpa teknụzụ, yana mmejuputa iwu dị irè. Mgbe ndị ahịa kpọtụrụ anyị ka anyị nye "Ndị ntụgharị asụsụ akwadoro", a na -enwekarị mgbagwoju anya maka ihe nke a pụtara n'ezie. Okwu a bụ “gbara mbọ” na-ezo aka n'ụdị aha ndị ntụgharị okwu na-enweta site n'ịmecha ọrụ nkuzi yana ịgafe ule ọnụ na ederede siri ike. Anyị ghọtara na asụsụ bụ naanị otu n'ime ọtụtụ ọrụ dịịrị gị. Site n'ịjụ ajụjụ ndị ziri ezi na ichepụta ụzọ dị irè, anyị nwere ike inyere gị aka ma belata nrụgide site na iduzi gị nke ọma n'usoro a.
Inye ọkachamara ntụgharị asụsụ ziri ezi maka mkpa gị na San Jose
Anyị nwere nnukwu akụrụngwa nke ndị ntụgharị dị na San José yana ndị ọrụ nwere nka na enyi na-enyere gị aka ngwa ngwa na ọnụ ahịa nke ọma mezuo arịrịọ gị. Ọ dị oke mkpa na ị nwere ọnụ ọgụgụ ziri ezi nke ndị ọkachamara, ndị nwere ahụmahụ, ndị ntụgharị asụsụ tozuru etozu, nchikota akụrụngwa ọdịyo kwesịrị ekwesị na nkwado ọrụ nka na saịtị. Ka AML-Global nye gị nka ya.
San Jose Ntụgharị n'ime ụwa na-agbanwe agbanwe
Nje virus Corona malitere ịkpata nsogbu na US na Machị nke afọ 2020. Nje virus a na-atụ egwu agbanweela nwa oge ka anyị si arụ ọrụ wee gbanwee, ugbu a, iji ntụgharị ihu na ihu. Ewubela ụkpụrụ ọhụrụ n'ime obere oge ma anyị ghọtara na nhọrọ ndị ọzọ dị mkpa dị mkpa maka ị na-aga n'ihu na-azụ ahịa gị nke ọma. Obi dị anyị ụtọ ịnye gị ezigbo ụzọ ọzọ ị ga-esi bie ndụ, ntụgharị uche nke onwe.
Ịsụgharị Ngwọta, Nchekwa, Ọnụ Ahịa & Akụ
Mebere njikọ bụ sistemụ VRI anyị ma enwere ike ịnweta ya ma emebere ya na ihe achọrọ. Anyị na-arụ ọrụ Asụsụ 200 +. Ndị ntụgharị asụsụ asụsụ anyị dị ịtụnanya dị na elekere, elekere 24, ụbọchị asaa n'izu, mgbe ịchọrọ anyị, na mpaghara oge ọ bụla. Njikọ mebere dị mfe iji, dị mfe ịtọlite, dị ọnụ ahịa, na-agbanwe agbanwe yana na-arụpụta ihe. Pịa ebe a maka ozi ndị ọzọ.
A na -enye ọrụ ntụgharị asụsụ OPI n'ihe karịrị 100 yana asụsụ dị iche iche. Ndị ọkachamara asụsụ anyị dị gburugburu elekere, na mpaghara oge ọ bụla, awa 24, izu ụbọchị asaa. OPI dị mma maka oku nkenke n'ogologo yana oku na-adịghị n'oge awa ị na-arụ ọrụ. Ha dịkwa mma maka ihe mberede, ebe nkeji ọ bụla bara uru yana mgbe ị nwere mkpa ndị a na-atụghị anya ya. OPI dị ọnụ ahịa, dị mfe ịtọlite ​​​​, dị mfe iji, yana enwere ike ịbụ nhọrọ gị zuru oke. Ọrụ achọrọ na nke edoberela ụzọ ha abụọ dị maka ịdị mma gị. Pịa ebe a maka ozi ndị ọzọ.
Kedu ebumnuche ebumnuche nkwukọrịta gị? Ụlọ ọrụ ọ bụla nwere ebumnuche ebum n'uche. Ebumnuche anyị bụ ịhụ na emezuru ebumnuche gị. Anyị ga -eso gị rụọ ọrụ n'ime oge ị chọrọ iji nweta ihe ịga nke ọma ị chọrọ.
Ndị ntụgharị okwu na San Jose na mpaghara gị
N'ime ihe karịrị nkeji iri na ise nke narị afọ, Ọrụ Asụsụ America (AML-Global) abụrụla onye na-eweta ntụgharị asụsụ njegharị yana ọtụtụ ọrụ asụsụ. Anyị na-arụ ọrụ na San Jose na gburugburu ụwa n'asụsụ niile maka ntụgharị ederede, ntụgharị na ntụgharị okwu. Ndị ọrụ nwere ahụmihe na Ọrụ Asụsụ Amerịka nwere ahụmịhe na teknụzụ dị oke mkpa iji nyere anyị aka ịchọta onye ntụgharị okwu mpaghara kacha mma na asụsụ niile na ọnọdụ maka ihe ọ bụla ọrụ gị nwere ike ịbụ.
Mụtakwuo maka ọrụ anyị site n'ịkpọ oku 800-951-5020
Ọnọdụ San Jose:
88 Ndịda 3rd St.,
San Jose, CA 94104